कुर्सी पहिलो कि नागरिकको स्वास्थ्य ? « Janata Samachar
कठै ! देशको राजनीति यो हालतमा पुग्ला भनेर कुन नेपाली नागरिकले सोचेका थिए होलान ? कोरोना महामारीमा नागरिक सरकारबाट जीवन रक्षाको आशा गरिरहँदा राजनीतिक खिचातानी र सत्ताको लुछाचुडि यो भन्दा विडम्बना अरु के हुन्छ ?
सरकार, राजनीतिक दल, नागरिक समाज सबै महामारी विरुद्ध लड्नुपर्ने अवस्थामा हेर रमिता ! यस्तो घिनलाग्दो पनि हुँदो रहेछ राजनीति ! नितान्त आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थमा लिप्त भएर नाँङ्गै बनेका नेताहरूको यो महामारीमा भित्री बस्त्र समेत खस्ने अवस्थामा पुगेको छ । बस्त्रविहीन हुँदा समेत थाहा पाएका छैनन् ।
‘कुन्नी के गर्नेलाई भन्दा देख्ने लाई लाज’ भइसक्याे नागरिकलाई तर उनीहरुको ध्यान अन्तै छ । आम नागरिकलाई राज्य भएको अनुभुती दिन सकेका छैनन् । राजनीति भनेको देश र नागरिकको सेवाको लागि हो, यसमा निष्ठा र त्याग हुनुपर्छ भन्ने भाषण गरेर नथाक्नेहरुलाई यो अवस्थाले कति गिज्याइरहेकाे होला ?
दिनदिनै सयौं नागरिक अस्पतालमा बेड नपाएर, अक्सिजन नपाएर, औषधि नपाएर मरिरहेको अवस्थामा सत्ताको खिचातानी । माहामारी नियन्त्रणका लागि सरकारले निशेधाज्ञा लागू गरेको छ त्यसको प्रत्यक्ष असर दिनभर कमाएर बिहान बेलुका छाक टार्नेहरुमा परेको छ ।
कैयौं अभियन्ता, समाजसेवीहरु नागरिकको ज्यान जोगाउन लागि परेका छन् । नागरिकले पाउने शिक्षा र स्वास्थ्य संविधानमा मौलिक हकमा उल्लेख गरिएको छ तर नागरिकको पहुँचमा छैन । नागरिकको करबाट तलब–भत्ता खाएर सरकारी गाडीमा झन्डा हल्लाउँदै हिड्नेहरुले स्वास्थ्य संवेदनशीलताप्रति ध्यान दिएको जस्तो देखिदैन ।
निर्वाचन आउन धेरै समय छैन तर यस्तो महामारीको अवस्थामा नागरिकको ज्यान जोगाउनेभन्दा एकथरी सत्ता कसरी जोगाउने र अर्कोथरी कसरी सत्ता ढाल्ने खेलमा लाग्दा नागरिकले ज्यान गुमाईरहेका छन् । यस्तो जटिल अवस्थामा सबैको ध्यान महामारी विरुद्धको लडाइँमा केन्द्रित गर्नु जरुरी छ र सबै लागौं ।